Regional Sales Leader at Rent2Own Co, Ltd
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ကုမ္ဗဏီအဖြစ် ၂၀၁၆ခုနှစ် အစောပိုင်းမှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်း သန်လျင်မြိုနယ်တွင် ၀န်ဆောင်မှုစတင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၉ ၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ တ ၀ှမ်းလုံးရှိ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၇ ခုတွင် ရုံးခွဲပေါင်း ၃၉ ရုံးဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၀န်ထမ်းအင်အား ၄၀၀ ကျော်နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံ တ၀ှမ်းလုံးရှိ ဆုိုင်ကယ်လိုအပ်နေသော ပြည်သူများကို ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ ခရီးသွားလာရေးနှင့် နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုများ တိုးတက်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သည် တဖက်တလမ်းမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့်အတွက် အလွန်ပင် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝသွားလာလှုပ်ရှားမှုတွင် ဆိုင်ကယ်သည် အရေးအကြီးဆုံးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအသိပင် ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျေးလက်နေပြည်သူများ ၏ လူနေမှုဘ၀များ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့် အလုပ်အ ကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
တစ်ဆနှင့်တစ်ဆ ကြီးထွားလာသော ကုမ္ဗဏီ တစ်ခုအနေဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ ကုမ္ဗဏီလုပ်ငန်းများ ထပ်မံချဲ့ထွင်ရန် အတွက် ၀န်ထမ်းသစ်များ အစဉ်အမြဲ စုဆောင်းလျက်ရှိပါသည်။ အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိသော၊ အေးဆေးတည်ငြိမ် ပြီး ကောင်းမွန်သောပညာရေးနောက်ခံ၊ ရိုးသားကြိုးစားပြီး တက်ကြွဖျက်လက်သောသူများအား ကျွနု်ပ်တို့ ကုမ္ဗဏီ နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန် အမြဲ ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။
Ahlone, Magway Division 19 February 2020
Job Reference: MJ1541586950717
-Overview and deliver Daily, Weekly and Monthly sales targets in your region
- Ensure all sales areas are target driven
- Monitor CAs’ telesales performance
- Ensure execution of POS Visuals is in line with Company standard
- Provides ongoing support to the team to distribute and produce across region
- Manageateam of Local Sales Leader in order to maximize sales and meet or exceed goals
- Overview relationship with the network of merchants
- Address serious issues with relevant merchants in regards with Sales,O.B.,and Complaints
- Overview new merchants’ signings, new potential extensions and new potential secondary markets for TPs
- Manage sales support function
-  Supervise OB Management
- Maintain POS inventory in the system
- Manage other sales admin tasks
- Implement new changes and policies
- Set directions and goals to optimize sales and sales process
- Perform monthly Evaluations and Assessments
Delivery of Sales target of your region
 Optimization of Sales, POS and Sales Process
 Execution of new policies and changes
Assistance to CAs in their techniques
 OB management
 Sales related admin tasks
1. Any Graduate( have sales and marketing diploma prefer)
2.Fluent in English Language (both Verbal and Written)
3. At least over3year experience in related field
4.Strong management, problem solving and reporting skill
6. Able to under pressure
= salary + other allowance
Medical Representative (HCPS) Fair Deal Co.,LTD
Key Account Executive (Mandalay) HEINEKEN Myanmar
Business Development Manager AA Medical